म छ्याङ खायर सुते, बिउझिदा बाजे ले मरो छातीमा ……….
एमसीसी नेपालको हितमा छ जसरि नि पास गर्नुपर्छ : डिला संग्रौला
८ बैशाख २०७८, बुधबार १०:१४
नेपालकी ‘जलपरी’ गौरिका एसियाका ३० प्रतिभाको सूचीमा
८ बैशाख २०७८, बुधबार ०९:५७
कोरना हस्पिटलमा कार्यरत नर्सको कोरना लागेर मृत्यु ।
७ बैशाख २०७८, मंगलवार १०:२२
सन्तोष देउजालाई के भयो यस्तो ?
६ बैशाख २०७८, सोमबार ०८:१४
ज्ञानेन्द्रलाई राजाको हैसियतमा जथाभावी गर्दै हिड्ने छुट छैन: झलनाथ खनाल
३ बैशाख २०७८, शुक्रबार ११:०७
२ बैशाख २०७८, बिहीबार १३:५५
गुल्मीमा विधार्थीहरुका प्रिय ४५ वर्षीय प्रधानाध्यापक मोटरसाइकल दु’र्घटनामा परि ज्यान गुमाए !
२८ चैत्र २०७७, शनिबार १४:०४
२८ चैत्र २०७७, शनिबार १०:३७
२६ चैत्र २०७७, बिहीबार १९:२७
कञ्चनपुरमा कोरोना सङ्क्रमित पुरुषको मृत्यु
२५ चैत्र २०७७, बुधबार १०:५७
सारै दुखद खबर : विहे गरेको १ वर्ष नपुग्दै श्रीमान श्री’मतीको एउटै चिता, को हुन उनीहरु हेर्नुस
२१ चैत्र २०७७, शनिबार ०७:५९
१७ चैत्र २०७७, मंगलवार ०७:१४
१४ चैत्र २०७७, शनिबार १०:२३
‘कुलमान हुँदा नभएको लोडसेडिङ अहिले किन ?’ विजय लामा
११ चैत्र २०७७, बुधबार १५:५९
फेरि एक पटक बलिदानीपूर्ण आन्दोलनको आवश्यकता छः बाबुराम भट्टराई
११ चैत्र २०७७, बुधबार ११:२९
२६ चैत्र २०७७, बिहीबार १९:२७ प्रकाशित
काठमाडौ । अहिले बालिकाहरु घरभित्रै असुरक्षित हुने गरेका छन् । बालिका माथि भएका घटना आफन्तहरुनै संलग्न हुने गरेको घटना सार्वजनिक भएका छन् । हालै गोरखामा यस्तै घटना भएको छ । एक बालिकालाई आफ्नै मामा घरको हजुवुवाले क र णी गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ ।
बालिकाले आफु माथि भएको घटना सुनाएकी छन् । बालिकाकी आमाले पनि छोरी माथि भएको घटनाका बारेमा जानकारी गराएकी छन् । आफ्नै बुवाले नातिनी मा थि य’स्तो ग र्ला न् भन्ने नसोचेको छोरीको भनाई छ । छोरीको छोरी माथि न रा म्रो ब्यवहार गर्ने हजुरवुवालाई कारवाही गर्नुपर्ने माग उनको छ । आफ्नो छोरीको भविष्य विगार्ने बुवालाई कुनै हालतमा न छो ड् ने भन्दै छोरीले कानुनी ल’डा ई ल ड् ने बताएकी छन् ।
छोरीको अवस्था परिवर्तन हुन थालेपछि आफुले थाहा पाएको आमाको भनाई छ । शंका लागेर पि सा व जाँच गराउँदा उनको ग र्भ रहेको थाहा पाएको आमाको भनाई छ । त्यसपछि छोरीलाई कसले तँलाई य स्तो ग रे को हो न ढा टेर भन भनेर सोधेपछि छोरीले आफुलाई सबैकुरा बताएको आमाको भनाई छ ।
खाना खाने बेलामा हजुरवुवाले छ्या गं खु’वा एको बालिकाले बताएकी छन् । मैले कहिल्यै पनि यो भन्दा पहिला खा ए की थिइन् पहिलो पटक खा ए का’ले मैले त्यस पछि केही थाहा पाइन् । वाजेकै कोठामा सु ते छु मलाई के भयो मैले केही थाहा पाइन् बालिकाले भनेकी छन् ।
उनले महिनावारी जहिले पनि ग ड ब ड हुने भएकाले आफुले यसै हो भनेर भन्न पनि नसकेको बालिकाले बताएकी छन् । तर आमाले अस्पतालमा गएर जाँच गराउँदा भने आफु ग र्भ वती भएको थाहा भएको बालिकाको भनाई छ ।
२६ चैत्र २०७७, बिहीबार १९:२७ मा प्रकाशित
काठमाडौं जादै गरेको बस दुर्घटना, तीनको मृत्यु, मनमा मायाँ भए RIP लेख्नु होला !
हाम्रो मुख्य उद्धेश्य भनेको ओलीलाइ हटाएर कांग्रेस सरकार बनाउनु हो !
प्रधानमन्त्री ओली ‘कुहिएको अन्डा’ जस्तै हुन् : प्रचण्ड